Ungasifaka njani isitayile kwiLizwi kwi-iPad
Izitayile zamagama zonga ixesha kuba xa ufaka isicelo isitayile, Ufaka imiyalelo yokufomatha kwi-iPad yakho ngaxeshanye. Uhlobo lwesihloko se-1, umzekelo, sisebenzisa iifom ezifanelekileyo izihloko-inzima ifonti, ubungakanani obukhulu befonti. Izitayile zikunika ithuba lokwenza izihloko kunye namanye amaxwebhu ohambelanayo. Zonke izihloko zenqanaba lokuqala zijongeka ngokufanayo xa usebenzisa i Isihloko 1 isitayile kuwo onke amanqanaba okuqala.
Lonke uxwebhu luza nezakhelweyo styles kwizitayile ezuzwe njengelifa kwitemplate eyayenziwe ngayo. Ezi zitayile ziyafumaneka kwimenyu yeeTayile kwithebhu yasekhaya.
KwiLizwi 2011 (uguqulelo lwe-desktop lweLizwi), ungaxela kwangoko ukuba ingaba isitayile ngumhlathi okanye isitayile somlinganiswa kuba iisimboli ezikwi-Styles menu zikuxelela kangako. ILizwi le-iPad alikho nzima, nangona kunjalo. Uhlobo lwayo lweemenyu alukuxeleli ukuba zeziphi izimbo zomhlathi okanye izimbo zomlinganiswa.
Konke onokukwenza kukuthatha uthsuphe kwigama lesimbo (mhlawumbi) ukuqonda ukuba luhlobo luni lwesitayile ojongana naso. Umzekelo, isitayile esibizwa Ukugxininisa kunokwenzeka ukuba sisitayile somlinganiswa esonyusa amagama, ngelixa isihloko se-3 phantse isitayile esisebenza kuyo yonke imihlathi.
Faka isitayile ngemenyu yeeTayile kwithebhu yasekhaya.
Landela la manyathelo ukusebenzisa isitayile:
Thepha okanye ukhethe icandelo loxwebhu lwakho ofuna ukulusebenzisa kwisitayile.
Into oyikhethayo ixhomekeke kuhlobo lwesimbo ofuna ukusisebenzisa.
Igama okanye ibinzana (isitayile somlinganiswa) : Khetha igama okanye ibinzana. Uhlobo olukhethileyo luya kusetyenziswa kuphela kwigama okanye ibinzana olikhethileyo.
Umhlathi (isitayile somhlathi) Cofa kumhlathi. Izitayile zomhlathi zisebenza kuwo wonke umhlathi okuso isikhombisi. Into ekufuneka uyenzile kukucofa kumhlathi ukufaka umhlathi okanye isitayile esidityanisiweyo.
Ngaphezulu kwesiqendu esinye (isitayile somhlathi) : Khetha zonke okanye iinxalenye zemihlathi. Kuba izitayile zomhlathi zisebenza kuwo wonke umhlathi, unokukhetha icandelo lomhlathi. Akunyanzelekanga ukuba ukhethe yonke.
Kwi eKhaya isithuba, thepha iZimbo iqhosha kwaye ukhethe isitayile kwimenyu ehlayo.
Awusithandi isitayile osikhethileyo? Cinezela Hlehlisa iqhosha kwaye uqalise lonke.
Awunakho ukwenza okanye ukutshintsha izitayile kwiLizwi kwi-iPad. Ukuba ufuna ukwenza oko, vula uxwebhu lwakho kwiLizwi 2011 kwiMac okanye olunye uhlobo lweLizwi.
Uyihlela njani iKhowudi yeTemplate kaJoomla
Usebenza njani kwiNdlela eKhuselekileyo kwiKhompyuter yakho
Izicwangciso ezili-10 ezisebenzisekayo zeGmail
Uyisebenzisa kanjani iMicrosoft Space Hlela iphepha
Unxibelelwano olusisiseko: IiNtambo zikaSomlomo
I-BRAVECTO Amacwecwe ahlaziyiweyo ama-250 mg (eCanada)
I-102 (iBupropion Hydrochloride eyandisiweyo-yokuKhutshwa (XL) 300 mg)
C 230 (Acetaminophen kunye neOxycodone Hydrochloride 325 mg / 10 mg)
Uyisebenzisa kanjani iTranshead yentloko
Ukuseta Ukukhetha Imeyile kwi-iCloud
Ithetha ntoni ivosotros ngesiSpanish
yintoni umngxunya womzimba
zithini iziphumo zemolly
ipilisi emhlophe ip 101